SAXEEXYADA Sanadka - Saxeexyadii Ugu Fiicnaa Xilli Ciyaareedkan - Axadle Wararka Maanta
Xilli ciyaareedka 2020-21 ayaa ah mid gabi ahaanba dhammaad ku dhaw oo kulamo tirsani hadheen waxaana hadda la go’aamin karaa durtaba wixii ay soo gudeen kooxaha iyo ciyaartoydoodu.
Hadda waxa shax laga sameeyay xiddigaha ah saxeexyadii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan, shaxdan ayay seegeen magaco waaweyni halka ay kusoo baxeen ciyaaryahano aan cidina filayn inay saamayn sidaas u weyn yeeshaan.
Aan ku furanee goolhayaha shaxda ayaa ah shabaq ilaaliyaha Chelsea ee Edouard Mendy kaas oo xaliyay dhibaatadii goolka ee Blues, 29 sano jirka ree Senegal ayaa ah mid kamida kuwa shabaqooda inta ugu badan ilaashaday Yurub.
Shaxdan oo ah hanaanka 3-3-2-2 ayay saddexleydeeda daafac yihiin Ruben Dias oo ah kala duwanaanshaha Man Metropolis ee xilli ciyaareedkan iyo kii hore, Achraf Hakimi oo Inter Milan heer kale ku gaadhay iyo Wesley Fofana oo Leicester Metropolis FA Cup kula guuleystay isla markaana cajiib u noqday.
Saddexda khad dhexe ayaa kala ah Hoijbjerg oo Tottenham oo markale xilli ciyaareed liita qaadanaysa ka dhex iftiimayay, Pedri oo ay qiime jaban kusoo heshay Barcelona balse joogto ka noqday iyo Jude Bellingham oo Borussia Dortmund muhiim u noqday isaga oo kaliya 17 sano jir ah.
Labada garab weerar ayaa kala ah Diogo Jota oo qudhiisu ka dhex iftiimayay Liverpool oo xilli ciyaareed liita qaadatay iyo Andre Silva oo asal ahaan weeraryahan ah balse xulashadan garab ahaan loosoo xushay, Silva ayaa kamid ahaa gool dhaliyayaasha ugu sarreeya Bundesliga.
Labaleyda weerar ee shaxdan ayaa kala ah Luis Suarez oo ah xiddiga ugu muhiimsan kooxda Atletico Madrid ee ku dhaw inay La Liga ku guuleysato waxaana la midaysan Burak Yilmaz, 35 sano jirkaas oo kooxda Besiktas laga fasaxay ayaa 15 gool usoo saxeexay Lille kuna dhaw inuu horyaalka Ligue 1 ku guuleysato.
The #1 Meals to Keep away from to Lose Weight, In keeping with a Dietitian